Fanadinana bakalorea Mety ahemotra ny fe-potoana fisoratana anarana
Fanadinana CEPE Izay lesona vita ihany no hanadinana
Na dia mbola tsy voafaritra sy tsy fantatra mazava aza hatreto ny daty voatondro hanatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE noho ny hamehana ara-pahasalamana dia efa vita ny fisafidianana farany ireo laza adina ho an’ireo kilonga madinika hiatrika izany fanadinam-panjakana izany.
Fiarehana fanadinana Mitaintaina ireo ray aman-drenin’ny mpianatra
Miha sorona miha sorona hatrany ireo mpianatra Malagasy hanala fanadinana, raha ny fanehoan-kevitr’ireo ray aman-dreniny,
Sekoly tsy miankina Hifindra kilasy ny ankamaroan` ny mpianatra…
Raha ny resaka fampianarana amin` ireo sekoly tsy miankina, efa azo atao hoe milamina ny fifindrana kilasy ho an` ireo mpianatra tsy manala fanadianam-panjakana (classes intermediaires)
Faritra Bongolava Hotanterahina anio ny fanadinana CEPE andrana voalohany
Faritra mbola tsy misy olona mararin’ny tsimok’aretina COVID 19 ny any amin’ny Faritra Bongolava.
Tontolon'ny fampianarana FRAM miisa 4000 nanao fifanarahana tamin'ny fanjakana
Mpanabe na “Maitre FRAM” miisa 4000 omaly no notolorana fifanarahana ho mpiasam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana tekinika tetsy Anosy.
Gym Bepc sy Bacc Nodinihina ny paikady hiatrehana azy
Niara-nikaroka vahaolana hahafahana manatanteraka ny adina ara-panatanjahantena (EPS) ho an’ny fanadinana BEPC sy Bakalorea, tetsy amin’ny efitrano malalaky ny MENETP Anosy,
Claude Raharivoatra Tsy mampaninona ny taona fotsy, saingy ...
Mbola miaina tanteraka ao anatin’ny ady amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina coronavirus isika ankehitriny.
Mifanarana anio 30 aprily ny fisoratana anarana ho an’ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana. Maro anefa no tsy afaka nameno ny antontan-taratasy. Zara raha 3% ny taham-pisoratana anarana ho an’Antananarivo manokana.
Ny olana eny anivon’ny sekoly dia ireo ankizy lasa nody any amin’ny faritany. Rehefa haka kopia dia tsy maintsy mody any amin’ny faritany na any amin’ny ray aman-dreny any ambanivohitra misy ny toerana nahaterahana no alaina. Tsy afa-niakatra teto Antananarivo anefa noho ny hamehana ara-pahasalamana, ka nampitsaharana ny fitaterana. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony, ny oniversiten’Antananarivo,… ka any amin’ny Filankevitry ny minisitra no hanapahana ny mety ho fihemorana. Ny azo antoka dia tsy maintsy hisy ny bakalorea, hoy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny.